Bogga ugu weyn » blog » Waxyaabaha ay ka kooban yihiin Dharka Salafka ee Miisaan culus
Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonnaa maaddooyinka ugu fiican ee lagu qurxiyo saladhka miisaanka oo yaraada waxaanan la wadaagi doonnaa talooyin ku saabsan waxyaabaha aad ku isticmaali karto saladhyada si ay uga caawiso kor u qaadista dheef-shiid kiimikaadkaaga.
Dhamaan Dijon mustard dabiiciga ah ayaa runtii saameyn weyn ku yeelan kara habka dheef-shiid kiimikaadkaaga, xitaa nasashada, iyo sidoo kale hagaajinta dheefshiidka guud ee cuntada iyo ka faa'iideysiga nafaqada.
Apple Cider Vinegar wuxuu ka caawiyaa culeyska-dhuminta iyadoo la joojinayo beerka, kordhinta habka dheef-shiid kiimikaadka, iyo xakamaynta heerarka gaajada!
Haddayna intaas ku filnayn, geedo kale iyo dhir udgoon sida sinjibiil, toon, liin, cayenne, milix, basil, iyo dhir dhab ahaantii dhammaantood waa la muujiyey inay leeyihiin waxyaabo dheef-shiid kiimikaad-kicinaya oo muhiim ah maadaama ay kicin doonaan dhadhankaaga si aad u kabaha!
Keebaa si sax ah u ah waxa Dave iyo Karine ay dhab ahaan isugu soo ururiyeen taxanaha Cunnooyinka Dheef-shiid kiimikaadka - in ka badan 250 suxuunno ah, oo dufan baabi'in ah si aad uga soo xusho. Iyo dabiici ahaan, waxay leeyihiin noocyo kaladuwan oo dheef-shiid kiimikaad ah oo xoojiya cuntada saladhu ka soo xusho!
250+ Savory Metabolic Cunto Cunidda <——- Degdeg & Fudud!
Marka lagu daro raacida qorshe cunto caafimaad leh, jimicsigu had iyo jeer waa muhiim sidoo kale! Haddii aad ku talojirto sameynta wadnaha, orodku waa hab wanaagsan oo lagu gubo dufanka jirka.
Ciyaartooy badan oo ay kujiraan orodyahanadu waxay isticmaalaan kaabis preworkout si kor loogu qaado heerarkooda tamarta. Haddii aad ka fekereyso inaad u isticmaasho kaabis hore ee tamarta, eeg Saameynada jimicsiga kahor shaqeynta
Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxaysatay qodobkaan! Noo ogeysii fikradahaaga faallooyinka hoose